သက်သတ်လွတ်စားရင် ကျန်းမာရေးကောင်းနိုင်ပါသလား။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » သက်သတ်လွတ်စားရင် ကျန်းမာရေးကောင်းနိုင်ပါသလား။
Posted by ခင်ခ on Dec 19, 2012 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 25 comments
သက်သတ်လွတ်စားသူတွေဟာ အခွံမာသီး (Nuts)၊ ထမင်းကြော်၊ အာလူးကြော်နဲ့ အကြော်စုံတွေလို အဆီများ တဲ့ အစာစားတတ်ကြပါတယ် ။ ဟင်းအချို့မှာ ပါဝင်တဲ့ အုန်းဆီနဲ့ စားအုန်းဆီတွေဟာ ပြည့်ဝဆီတွေမြင့်မားစွာ ပါရှိပြီး သွေးတွင်း ကိုလက်စထရော အဆင့်ကို မြင့်တက် စေနိုင်ပါတယ်။ ဥအမျိုးမျိုးနဲ့ နွားနို့ကိုပါ စားသုံးတဲ့ သူတွေ Lactoovo vegetarians ဟာလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အဆီတွေစားသုံးမိနေကြပါတယ်လို ။ တစ်ပတ်ကို ဥသုံးလုံးထက် ပို မစားသင့်ပါ။
မလိုင်အပြည့်ပါဝင်တဲ့ နွားနို့အစား အဆီမပါဝင်တဲ့ နွားနို့နဲ့ ဒိန်ချဉ်ကို စားသုံးသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုကောင်းတာ ဒါမှမဟုတ် ပိုဆိုးတာဖြစ်စေဖို့အတွက် အသားနဲ့ အရွက်တွေ နှစ်မျိုးစလုံး စားသုံးမယ့် အစား ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပဲစားဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးက အာဟာရ ညီညွတ် ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်သာစားတဲ့ ရောဂါတချို့ရှိသူတွေဟာ ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး အကြံဥာဏ် ယူသင့်ပါတယ်။
ဥပမာ ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူတွေဟာ ပိုတက်စီယမ်ပါဝင်မှုများတဲ့ ငှက်ပျောသီး၊ ဒူးရင်းသီးနဲ့ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို သတိထားပြီး စားရပါမယ်။ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးနေတဲ့အတွက် ပိုတက်စီယမ် အဆင့် ကို ပုံမှန်ဖြစ်နေအောင် မထိန်းထားနိုင်တဲ့ အတွက် သွေးတွင်းပိုတက်စီယမ် အဆင့်တွေ မြင့်တက်နေရင် နှလုံးခုန် နှုန်းစည်းချက်မမှန်တာတွေ ဖြစ်တတ်လို့ပါ။
ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိသူတွေ အနေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို မချက်ပြုတ်ခင်မှာ သူတို့မှာပါဝင်တဲ့ ပိုတက် စီယမ်တွေ လျော့သွားအောင် နာရီအနည်း ငယ်ခန့် ရေစိမ် ထားသင့်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောကြပါ တယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အစေ့နဲ့ အသီးတွေကို အစိမ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်း အစာ မှအဆိပ်သင့်တာ မခံရလေ အောင် ဘုံပိုင်အောက်မှ ထွက်လာတဲ့ ရေနဲ့စင်အောင်ဆေးကြောပြီးမှ စားသင့်ပါတယ်။ သက်သက်လွတ် စား လေ့ ရှိသူတွေ မှာ အောက်ပါ အာဟာရဓာတ်တွေချို့တဲ့ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒါတွေကို ဖြည့်ပေးဖို့လိုပါ လိမ့်မယ်၊ ရရှိနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ညွှန်းထားပါတယ်။
အပင်မှရရှိတဲ့ သံဓာတ်ကို ခန္ဓာကိုယ်က ကောင်းကောင်းမစုပ်ယူနိုင်တဲ့အတွက် သွေးအားနည်း ရောဂါရရှိ နိုင်ပါတယ်။ သံဓာတ်ဟာ အစိမ်းရောင်ဟင်းရွက်များ၊ သဖန်းသီး၊ ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ အစိမ်းရောင် ပန်းဂေါ်ဖီမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
ကယ်လ်စီယမ်ဟာ တိုဟူး၊ အစိမ်းရောင်ပန်းဂေါ်ဖီ၊ အစေ့၊ အခွံမာသီး၊ ကိုက်လန်နဲ့ ပဲတွေမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
အပင်တွေမှာ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ အချို့ Amino acids တွေ ပါဝင်မှု နည်းပါတယ်။ အသား ဓာတ်ဟာ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အခွံမာသီး၊ အစေ့နဲ့ ပဲပိစပ်တို့မှာ ပါဝင်ပါတယ်။
အပင်စာအများစုမှာ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် B12 တွေ မပါဝင်တတ်ပါဘူး။ ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့ရင် ဦးနှောက်ပျက်စီးရောဂါ (Dementia) ရတတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B12 ပါဝင်တဲ့ အားဖြည့်ဆေး သောက်ပါ။
နှလုံးရောဂါပြဿနာဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ ကိုလက်စထရောအဆင့် လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ သီဟိုဠ်စေ့၊ ပဲပိစပ်မှ Omega-3Fatty Acids ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့က အ၀လွန်မှာဆိုးလို့ အသားရှောင်ပြီး အသီးအရွက်ဘဲ ရေရှည်စားကြတယ်၊ သက်သတ်လွတ် စားတဲ့ သဘောပေါ့။ တစ်ချို့ကတော့ အသားလုံးဝ မစားဘဲ သက်သတ်လွတ်ဘဲ စားကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပြောကြတယ် သူတို့က သက်သတ်လွတ်ဘဲစားတာ အသားဆိုလုံးဝရှောင်ရက်ပါနဲ့ ဘာလို့ရောဂါဖြစ်လဲ ဆိုလို့ ဖတ်ဖူးတဲ့ စာပေထဲက ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တာပါ။ အမှန်တော့ အသီးအရွက်နဲ့ အသား မျှတအောင်စားဖို့ပါဘဲလေ။
သတ်သတ်လွတ်စားတဲ့ ကျနော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို လိုအပ်လို့ စားရတဲ့ ဆေးတွေဆိုတာ ပဲလှော်ဝါးရတဲ့ အတိုင်း။
တစ်ပတ်တစ်ရက်တို့ တစ်ခါတစ်ရံမှ စားတာတို့တော့ ဘာမှမသိသာပေမဲ့ တစ်ချို့ ရာသက်ပန်သတ်သတ်လွတ်သမားမျိုးက တော့
ကို ခ ပြောတာတွေ မှတ်ထားသင့်တာပေါ့ နော်။
သူများအသက်လွတ်ပြီးစားနိုင်တာကိုတော့ အားပေးပါတယ်ဗျာ။ (မစားနိုင်တဲ့သူတစ်ချို့ကတော့ ဘုရားက သတ်သတ်လွတ်စားဖို့
မဟောခဲ့ဘူးလေးဘာလေး ပြောနိုင်တာပေါ့)။ :harr:
လိုအပ်လို့ သတ်သတ်လွတ် ဟင်း တစ်လစာလောက် စပ်ပေးဖို့လိုရင် ပြောပါနော့။
သက်သတ်လွတ် ကို တစ်ခါတရံမှ စားတဲ့သူတွေအတွက် ကိစ္စမရှိပေမယ့်
ရက်ရှည်စားကြတာတို့ အမြဲစားကြတာတို့ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်နိုင်တဲ့ ဓာတ်တွေရဖို့ ထဲ့ပြီးစားပေး သင့်တာတွေ သတိထားပေးဖို့ရယ်၊ ပြီးတော့ Omega-3Fatty Acids တို့ ဗီတာမင် B12 ပါဝင်တဲ့ အားဖြည့်ဆေး တို့တော့ သောက်ပေးသင့်ပါတယ်ဗျ။ ဦးဆုံးကွန်မန့်အတွက် ကျေးဇူးပါ မခိုင်ဇာရေ။
ဒီ သတ်သတ်လွတ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာတွေထဲဖတ်ဖူးတာကတော့ ဒေ၀ဒတ်က သံဃာကို သင်းခွဲချင်တာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားဆီမှာ သတ်သတ်လွတ်စားဖို့ လျှောက်တယ်ဆိုပြီး စ ကြားဖူးတာပဲ…မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်တောင် ဒီအချက်ကို လက်မခံခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်…တခါတလေ စားတာကလွဲပြီး အမြဲတော့ သတ်သတ်လွတ် မစားသင့်ဘူး ထင်တာပဲ…အသားဓာတ်ဆိုတာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာလဲ လူတိုင်းသိနေကြပြီပဲ…ဖြူးဆရာတော်ဟောတဲ့ တရားနာခဲ့ဖူးပါတယ်…ကိုယ့်ဘာသာကို တင်းတိမ်ရောင့်ရဲ နိုင်လို့ ၊သတ္တ၀ါတွေကိုသနားလို့ဆိုပြီး သတ်သတ်လွတ်စားမယ်ဆို စားပါတဲ့…ကောင်းပါတယ်တဲ့…ဒါပေမယ့် လူအများရှေ့မှာ တို့က သတ်သတ်လွတ်ပဲအမြဲစားတာ..ဘာညာနဲ့ လူအများရှေ့မှာ ကြွားသလိုလို …အသားစားတဲ့ လူတွေကိုပဲ အကုသိုလ်ကောင်တွေလိုလို ပြောဆိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကုသိုလ်မရပဲ..အကုသိုလ်ပဲ ရမှာပါတဲ့…
မြတ်စွာဘုရားက မည်သူကဘဲဖြစ်ဖြစ် လှုတန်းတဲ့မည်သည့် ဆွမ်းဟင်း ကိုမဆို လက်ခံပြီးဘုန်းပေးသင့်လို့ သတ်မှတ်တော်မူထားတဲ့အတွက် သက်သတ်လွတ်မှ မလွတ်မှ စားသင့်ကြောင်း ဘုန်းပေးသင့်ကြောင်း မညွှန်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ် johnnydeer ရေ။
ဒေ၀ဒတ်က.. သက်သတ်လွတ်စားဖို့.. ၀ိနည်းထုတ်ခိုင်းတာ.. ငြင်းပယ်ရင်သံဃာဂိုဏ်းကွဲမယ်ဆိုတာ.. သိရက်နဲ့.. သံဃာဂိုဏ်းအကွဲခံပြီး.. ငြင်းပယ်လိုက်တဲ့.. ဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့.. လုပ်ဆောင်ချက်ကြည့်ပြီး.. သက်သတ်လွတ်..စားတာ/မစားတာဟာ.. ရဟန်းတွေအတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလည်း.. သိကြဖို့ပါပဲ..
ဒါပေမယ့်.. ခုခေတ်မှာတော့.. ဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့ဆန္ဒ.. ပျက်တော်မူပါတယ်..။
ဘုရားစကားထက်.. ဒေ၀ဒတ်စကားနားထောင်လိုက်နာတဲ့.. ဒေ၀ဒတ်ဂိုဏ်းသားက.. များလွန်းလို့လေ…။
သူကြီးရေးလိုက်မှဘဲ စဉ်းစားတွေးစရာတွေတောင် ရလာပါရောလားဗျ။
သတ်သတ်လွတ်စားလို့ … လူနည်းနည်းပေါ့တာအပြင် အသားရည်ကြည်လင်တာ .. အနံ့ဆိုးသိပ်မထွက်တာလောက်ပဲ … သိထားပါတယ် … ။ သတ်သတ်လွတ်စားတိုင်း ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး အန်ကယ်ရေ… ။ ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် အသားငါး ၊ အသီးရွက် မျှမျှ တတစားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် … ။
အမှန်ပါဘဲဗျာ။ ကျန်းမာရေးရှု့ထောင့်အရတော့ အသား ငါး အသီးအရွက် မျှမျှတတ စားသင့်ပါတယ်။
ပိုစ့်ရဲ့ဆိုလိုသည့် အဓိပ္ပါယ်ကို ထိထိမိမိလေးဖော်ညွန်းရေးလို့ မအိတုန်ကို BC ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။
ခြင် သိပ်မကိုက်ဘူးလို့ ကြားဖူးတယ်ဂျ ..
အိုက်ဒါ လက်တွေ့တော့ စမ်းဖူးဘူး …
သက်သက်လွတ် စားတိုင်းလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူးဆိုတာ
ဒါကြောင့် … ယနေ့မှစ သက်သက်လွတ် မစားတော့ပါ …
(အရင်ကရော စားတာ ကျနေဒါဘဲ .. အဟိ)
ယခုလိုဝေမျှမှုအတွက် မင်္ဂလာပါ ကိုခင်ခရေ……
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ သက်သက်လွတ်စားသူတွေဟာ ထ္မင်းကြောင်
အာလူးကြော် အခွံမာသီး ကိုစားတယ်ဆိုတာတွေ ကျနော်နှင့် ထပ်တူညီပါတယ်ခင်ဗျ။
အခြားအဟာရ နဲ့ပတ်သတ်တာလေးတွေလဲ သိခွင့်ရလို့ မှတ်သားသွားပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုအံစာတုံးရေ ဟုတ်လားဗျ သက်သတ်လွတ်စားရင် ခြင်သိပ်မကိုက်ဘူးဆိုတာ။
ကျွန်တော်တို့ကိုတော့ ခြင်တွေဝိုင်းဝိုင်းလည်ဘဲဗျာ။ တစ်ပတ်လောက် သက်သတ်လွတ်စားပြီး စမ်းကြည့် အုံးမလားလို့ဗျာ။ အဟဲ ထုံးဘူးလေးဘေးချလို့ပေါ့။
ကိုမိုဘိုင်ရေ သက်သတ်လွတ်စားတာကိုတော့ မစားနဲ့လိုမပြောလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အဟာရမျှတအောင်တော့ လိုအပ်တာလေးတွေလည်း ထဲ့စားစေချင်ပါတယ်။
ကလေးပိစိတွေက.. အသားမှမစားတာ.. ခြင်စုပ်တာပါပဲ..။
.. တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယသားတွေ..သက်သတ်လွတ်များတယ်..။ ခြင်စုပ်တာပါပဲ..။
ခြင်က.. လူ့အပူချိန်၇ယ်.. အသက်ရူတဲ့..ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရယ်ကိုအာ၇ုံခံကိုက်တာတဲ့..
Mosquitoes do not bite, they suck.
သက်သတ်လွတ်စားတာကတော့ စားချင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ စားဖြစ်တာ။ ကုသိုလ်ရတာ၊ မရတာ
တော့ သေချာမသိပါဘူး။ နဂိုထဲက အသားမမက်၊ အသီးအရွက်မြင်ရင် သွားရေကျနေသူမို့
စားရတာ မခက်ပါဘူး။ ရာသက်ပန် မဟုတ်သေးတော့ B12,Omega3တို့တော့ မလိုသေးဘူး
ကောင်းကျိုးကတော့….သက်သတ်လွတ်စားရင် ခံတွင်းရှင်းပြီး နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းတယ်။
အသားမစားရတဲ့နေ့မို့ အဲဒီနေ့မှာ စိတ်ရှင်းပြီး သည်းခံစိတ် ပိုကဲ၊ ဒေါသ ပိုနည်း ပါတယ်။
မကောင်းတတ်တာက….ပဲမပါ၊အာလူးမပါဘဲ အရွက်ချည်းပဲ စားပါများရင်တော့ အသားဓာတ် မပါလို့ နှင်းနှင်းကတော့ မောတတ်သလို၊ သွားရင်းနဲ့ ဒူးလည်းချောင်ပြီး ညွတ်ညွတ်သွားတယ်။
အဲလိုဖြစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ ပဲတို့၊အာလူးတို့ ပြန်စားပြီး ကုပေးရတာပဲ။ ဥတော့ မစားဘူး။
နို့တော့ စိတ်ကူးရရင် သောက်သလို အခွံမာသီးကလည်း Pistachios လောက်ပဲ စားဖြစ်တယ်။
( တစ်ပတ်ကို ဥသုံးလုံးထက် ပို မစားသင့်ပါ )
ကြက်ဥတွေကို အထုပ်လိုက်စားလေ့ရှိတဲ့ကျုပ်ကို ဘောဇိက ပြေတာလေးတစ်ခုပြန်အမှတ်ရမိတယ်
ဥတွေကို များများစားရင် အာရုံကြော ( နာ့ဗ် ) တွေ သေတတ်တယ်လို့ပြောတော့
အမေရိကန်တွေ.. ကြက်ဥနဲ့..သူနဲ့လုပ်တာတွေပေါင်းရင်.. တရက် ၂-၃လုံးစာလောက် တသက်လုံးစားနေကြတာပဲ..
အောက်ကသတင်းတွေအရဆို.. တပါတ် အလုံး၄၀ သမားတွေလည်းရှိတယ်..။
စာတွေလိုက်ဖတ်တော့.. အသက်၄၀အောက်က.. စားနိုင်သလောက်စား.. ပြသနာမရှိဘူးဆိုပါတယ်…
Cholesterol & Eggs: How Many Eggs Can You Eat Per Day …
Jun 4, 2009 – You eat 40 whole eggs per week.5to6eggs daily at breakfast. You eat them with veggies, really like them and feel full of energy at the gym …
တကယ်တော့.. ကြက်ဥနဲ့.နွားနို့ဟာ.. လူသားတွေအတွက်.. မရှိမဖြစ်..စားရမယ့်အရာထင်ပါကြောင်း..
မြန်မာတွေရဲ့ ကျိန်စာတခုဟာ.. (ဟိန္ဒူတွေနဲ့အတူတူယူတဲ့)သက်သတ်လွတ်ဆိုပြီး.. တမူးသာလို့.. နွားနို့ပါမသောက်တာဖြစ်ပါကြောင်း.. :harr:
In many developing countries the current meat, milk and egg consumption levels are very low compared to those in developed countries and major increases in ..
ခင်တဲ့ ကိုခ ရေ ..အစ်ကို့ကို ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘဲ ..
သတ်သတ်လွတ် ဆြာသမားတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး
အောက်ကစာ ကိုရေးချလိုက်ပါတယ်ဗျာ …
သတ်သတ်လွတ်စားတာကို လုံးဝ ဆန့်ကျင် ရှုံ့ချပါတယ်…။
(ခိခိ … ငတုံးဒေ အပင်တွေ ကရော အသက်မရှိတာကျလို့… လွတ်ပါ့မလား သတ်သတ်)
သိပ္ပံ အမြင်အရရော ဒေ၀ဒတ် ဂိုဏ်းသား ဖြစ်မယ့်အရေးကြောင့်ရော
လုံးဝ (လုံးဝ) သတ်သတ်လွတ်စားတာကို အားမပေးပါခင်ဗျား …။
သေချာ ပလင်န် မလုပ်ထားဘဲ သတ်သတ်လွတ် စားသကွ ဆိုတဲ့
အ၀ိဇ္ဇာ အတုံးအခဲတွေဟာ ဟောဒါတွေ ချို့တဲ့ တတ်ပါသတဲ့
vitamin B12, calcium, omega-3 fatty acids, vitamin D, iron, zinc, riboflavin (vitamin B2), iodine
နောက်တခါ အသားဓါတ်နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ အသားမစားဘဲ ပဲ စားရင်လည်း အသားဓါတ်ရတယ်ဆိုတာ
သိပ် ယေဘုရ ကျတဲ့ အပြောပါတဲ့ … ပဲကအရတဲ့ protein ဟာ ဒုတိယတန်းစား protein သာဖြစ်ပါသတဲ့
အသားကရတဲ့ protein ကို မမှီပါတဲ့ …။
ဆိုတော့ ဆက်ဆွဲရရင် carbohydrates, protein, fats ဆိုတဲ့ အာဟာရ အုပ်စုကြီး ၃စုမှာ
protein အသားဓါတ် က ဈေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သလို .. ဦးနှောက်ဆိုတဲ့ ဟာဂျီးကလည်း အဓိက
အဲ့သည့် ဈေးကြီးပါတယ် ဆိုတဲ့ protein ကိုမှ သုံးပါသတဲ့ …
ဘယ့်နှယ့်ကွယ် ကိုယ့်ထမင်းကိုယ် စားလို့ … ကိုယ့်ဦးနှောက်ကိုယ် ဒုတိယတန်းစား ပရိုတိန်းတွေ ထောက်ပံ့
ရသတဲ့ … ငတုံးဒွေ ။ အဲ … ဦးနှောက်က ပရိုတိန်း မသုံးရရင် မလုံလောက်ရင် Ketone bodies လို့
ခေါ်တဲ့ fat တမျိုးကို သုံးသတဲ့ … သူက ပိုလို့တောင် အဆင့်နိမ့်တဲ့ အာဟာရဖြစ်လေတော့ ….
အဟိဟိ…အော်… တုံးလို့ .. သတ်သတ်လွတ်စား ..သတ်သတ်လွတ်စားလို့ ပိုတုန်းလာ ..
ရာသက်ပန် သတ်သတ်လွတ် မေတ္တာရှင်တွေကို အကြံပေးချင်တာကတော့
သတ်သတ်လွတ် မေတ္တာရှင်မှန်း (မြင်လိုက်တာနဲ့ ထင်း ဂနဲ)သိသာအောင် Canine လို့ ခေါ်တဲ့
စွယ်သွား အပေါ်အောက် ဘယ်ညာ ၄ချောင်းကို နှုတ်ပစ်လိုက်ကြပါလား ဟင်င်င်င်င်
အဲ့ဒါတွေက သဘာဝတရားကြီးက အသားကို ကိုက်ဖြတ် ၀ါးဖို့ ထည့်ပေးထားတဲ့အရာတွေဆိုတော့…
ဟိုလေ…. မလိုဘူး ထင်လို့ပါ.. ဟီဟိ….
P.S ကျန်းမာရေး အခြေအနေတခုခု (၀ါ) ရောဂါတခုခုကြောင့် မဖြစ်မနေ သတ်သတ်လွတ်စားနေရသူတွေ
ကို မရည်ရွယ်ပါ။ (ဟိုလူဂျီး စတိဗ်ဂျော့ မပါ)
မောင်ဂီရေ ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ သက်သတ်လွတ်စားသည့် ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်ကတော့
သတ္တ၀ါတွေကို သနားကြင်နာလို့ သက်သတ်လွတ်နှစ်ရှည်စားတယ်လေ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သူနေတဲ့ခြံကိုရောက်စဉ်က ခြံရှေ့က သရက်ပင်ခြေမှာ ပါးရွက်ဆိတ်အုံရှိလို့ သူ့မြေးတွေစောတော့ကိုက်တာနဲ့ အင်ဆက်ကေလာစပရေး ဗူးနဲ့ဖြန်းနေလေရဲ့။ ပုရွက်ဆိတ်တကောင်၏ အသက်နဲ့ ဆင်တစ်ကောင်၏ အသက်မတူဘူးလို့များ လက်ခံထားလေ သလားလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်လေ။
အဲလို သက်သတ်လွတ်စားသူတွေလည်း ရှိမယ်ထင်တယ်နော်။
သက်သတ်လွတ် ရှုံ့ချသူအများစု ကြည့်လိုက်ရင် ဘုရားဟော လက်တလုံး အသုံးချတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘုရားက အစာစားရင် ရုပ်နာမ်ဆင်ခြင်စားရမယ် မှာသွားတယ်။ အဲလိုတော့ စားကြတာမတွေ့ဘူး၊ ကိုယ်မစားနိုင်လို့ အပြစ်တင်တာ ပိုနေတယ်။ တကယ်ပဲ ကိုယ့်ပယောဂ မပါပဲ သားသတ်ရုံ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေ တိုးပွားလာနေပါသလား။ သူ့အသတ်မသတ်ရဆိုတဲ့ သီလသည် ကိုယ်တိုင်မသတ်၊ သူများကိုလည်း အားမပေးရဘူး။ အသားမစားရ မနေနိုင်လို့ ဝိနည်းလွတ်နေတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလုံတိုင်း သက်သတ်လွတ်သမားတွေကို ကဲ့ရဲ့တာ ပိုဆိုးတယ်ထင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သက်သတ်လွတ်သမားတွေက အသားစားဝါဒီတွေလို ဒါမှဒါမှန်တယ် အစွန်းရောက်တာနည်းတယ်။ သတ္တဝါတွေကို သနားလို့ ကိုယ့်ပယောဂ မပါအောင် ရှောင်ကြဉ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကြာလာတော့ စောင့်ထိန်းလာတဲ့ကာလ အကျင့်ကို တန်ဖိုးထားပြီး လုံးဝကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတယ်။ သာမန်လူတွေက သဘောကျတယ်၊ ဒီတော့ အသားစားသမားတွေ နေရထိုင်ရခက်လာပြီး အရိယာသူတော်ကောင်းတွေ ပြောတဲ့စကား ယူသုံးတော့တာပဲ။ တခါက စာမှဖတ်ဖူးပါတယ်၊ ဘုန်းကြီးပွဲမှာ သက်သတ်လွတ်ဆွမ်းကပ်တော့ စားမဝင်ဘူးဆိုတာ… အသားစားဝါဒီများပြောသလို အစွဲကင်းကင်းနဲ့စားဖို့ဆိုရင် ဘာပြုလို့ သက်သတ်လွတ်ဆွမ်းကို မစားနိုင်ဖြစ်နေရမှာလဲ။ စားစရာရှိတာစားလိုက်လေ။ အဲဒါ ဘုရားပြောတဲ့ အစွဲကင်းခြင်းဆိုတာ သက်သက်လွတ် အစွဲဖြုတ်ဖို့ တခုထဲမှ မဟုတ်တာ၊ အသားစား အစွဲဖြုတ်ဖို့ရော မပါဘူးလား… အခုဟာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ အနတ္တ အနတ္တရွတ်ပြီး အနတ္တအစွဲ စွဲနေကြရင်း အခြားအစွဲရှိသူများကို အတ္တဝါဒီလို့ ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေသလို ဖြစ်နေပြီ…။
ကျွန်မကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစားအစာ (အသားပဲဖြစ်ဖြစ် ငါးပဲဖြစ်ဖြစ် အသီးအရွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်) ကိုပဲ စားတာ ခန္မာကိုယ်အတွက် အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတယ် …
အစားစားတယ်ဆိုတာ စိတ်ကျေနပ်မှုရဖို့ လိုတယ်တယ် … ကိုယ်ကြိုက်တာဆိုရင် နဲနဲလေးပဲ စားရလဲ စိတ်ကျေနပ်သွားတာမို့လို့ အစားလျော့ဖို့ (ပိန်ဖို့) အတွက် အထောက်အကူဖြစ်တယ် ..
မစားချင်တာ မကြိုက်တာတွေကို ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုပြီး ဆေးလိုသဘောထားစားနေရင်တော့ စိတ်ကျေနပ်မှု ရမှာမဟုတ်လို့ အဆင်မပြေဘူး …
အစားအစာထဲမှာတော့ အသားနဲ့ အသီးအရွက် ၂မျိုးလုံးစားရတာ သဘောကျတယ်။
အသီးအရွက် များများတော့ ပိုစားတယ်။ အသားချည်းပဲ စားရရင် ရင်ပူသလိုပဲ..
အရွက်ချည်းပဲ ချက်တာ ထက် အသားနည်းနည်း ထည့်ချက်ရင် ပိုကောင်းတယ်။
သက်သတ်လွတ်သမားတွေကို ရှုံ့ချတဲ့သူတွေ ထွက်လာအုံးမယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ…
ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကို ပုံကြီးချဲ့ မှီငြမ်းကိုးကားပြီး လုပ်နိုင်သူများကို အပြစ်ပုံချတတ်သူတွေပါလား…
‘အိုစမာ ဘင်လာဂီ’ တို့က ထိပ်ဆုံးက….
သက်သတ်လွတ်လည်းစားသလို ပုရွက်ဆိတ်လေးတောင် မသတ်ပါဘူး….အစွန်းရောက် မပါ..
သနားလို့ မသတ်တာတစ်ခုထဲ…ငါးပါးသီလ လုံချင်လို့ မဟုတ်ပါ…
သက်သတ်လွတ်စားတာကလည်း ကုသိုလ်ရတယ်၊မရတယ် သေချာ မသိပါ…
စားချင်စိတ်ရှိလို့ စိတ်ကောင်းတစ်ခုထားပြီး မိဘ နှစ်နေ့ ၊ စားလက်စနဲ့ နှင်းနှင်း တစ်နေ့ပါ
သူတို့ပြောတဲ့ တွေ့ရှိချက် ခုမှန်၊ခုမှားတွေကရော ယုံကြည်လို့ရပြီး လိုက်နာရင် 100%
သက်သတ်လွတ် မစားနိုင်တဲ့သူတွေကလည်း(ထောက်ပြသူ မပါ) စားနိုင်သူတွေကို အပြစ်မပြောသင့်သလို..စားသူတွေကလည်း ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် စားချင်တာလေး သင့်တင့်လျောက်ပတ်သလို ဖြည့်စွက်စားသုံးနေကြမယ်ဆို အဆင်ပြေပါတယ်….
ကန်စွန်းရွက်ထက် ကိုဘေးနွား သည် အရသာရော အာဟာရတန်ဖိုး ပါ ပိုပေသည်။
သက်သတ်လွတ်စားကြတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသားနဲ့ အသီးအရွက် စားကြတာဘဲဖြစ်ဖြစ် အဟာရဖြစ်အောင် စားပေးကြဖို့ပါ။ ကျန်းမာရေးရှု့ထောင်အရတော့ သက်သတ်လွတ်စားခြင်းထက် အသားနဲ့ မျှတအောင် စားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်၊ အဲ ဒါမှမဟုတ် သက်သတ်လွတ်ဘဲစားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိုအပ်နိုင်တဲ့ ပိုစ့်ပါ သက်သတ်လွတ်အစာတွေကို ဖြည့်စွက်စားပေးကြပါလို့။
သက်သတ်လွတ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အခြားအယူအဆ ထင်မြင်ချက်တွေကို ဆွေးနွေးကွန်မန့်ပေးကြသူတွေ ကိုလည်း ခင်ခ မှ ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
” အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ငါစွဲတွေနဲ့ သိမ်းကျုံးအပြစ်မပြောသင့်ပါ ”